श्रीमती बाहेक अरू कसैसँग डिप लभ परेको छ ? - कुराकानी - साप्ताहिक
हा..हा...जीवनको विभिन्न काखखण्डमा फरक–फरक खालका प्रेमहरू भए । स्कुल लाइफमा, कलेज लाइफमा वा प्रोफेसनल लाइफमा । ती सबै प्रेम थिए– कतिपय दुवै साइडबाट कतिपय एकतर्फी प्रेम थिए ती तर म त्यसको गहिराइमा गइन । जुन बेला प्रेमको गहिराइमा पुगेँ, त्यहीँ डुबें र म आज उनैसँग छु ।
कुनै युवतीको हातबाट पिटाइ खानुभएको छ ?
नेभर एन्ड इभर । मैले आजसम्म त्यस्तो दिन भोग्नु परेको छैन ।
तपाईंलाई मनपर्ने नायिका को हुन् ?
अफकोर्ष नीता ढुंगाना । चारवटा चलचित्र त तिमीसँग मात्र भैसक्यो ।
मसँग त्यत्रो चलचित्रमा काम गर्नुभयो, तर मलाई कहिल्लै प्रपोज गरौं जस्तो लागेन ?
किन नलाग्नु ? लाग्यो नि । त्यही कारणले त गाला रातै गाला रातै भन्दै चियाबगानमा पछ्याएको हैन ? तिम्रा लागि लेकसाइडमा बसेर मायाको धुन बजाउँदै नोटबुक पनि लेखेको थिएँ मैले तर तिमी पनि इङ्गेज रहेछौ । म त झन् फुल्ली प्याक्ड...भुलभुलैयामा परिएछ ।
तपाईं चलचित्र क्षेत्रबाट बिस्तारै टाढा भए जस्तो फिल भैरहेको छ, किन होला ?
धेरै गुडेपछि मेसिनलाई त आराम दिनुपर्छ, हामी मानिसले कहिलेकाहीँ केही रेस्ट पनि गर्नुपर्छ । काम मात्र कम गरेको हो, टाढा भएको होइन ।
तपाईंको विचारमा प्रेम चाहिँ के हो नि ?
प्रेम एउटा भूत हो । जसलाई मानिसले अनुभव गर्न सक्छ तर देख्न सक्दैन ।
श्रीमती र प्रेमिकामध्ये एक जना छान्नुपर्‍यो भने ?
श्रीमती...नो डाउट ।